Vonoina ary hamafa tanteraka ny kaontinao WhatsApp | Vaovao IPhone
Juan Colilla | | Vaovao IPhone, Fampianarana sy torolàlana
Angamba ianao efa nahita ny toe-javatra misy anao fa na inona na inona antony nanovanao ny nomeraon-telefaonanao na very / nafoinao izany, amin'ireny toe-javatra ireny dia avoakan'ny mpandraharaha io isa io ary omeo olon-kafa izany, olona iray izay ho gaga rehefa mametraka ny fampiharana fandefasan-kafatra WhatsApp malaza malaza raha toa ka nanadino ny mamafa ny kaontiny ilay teo aloha (manana fidirana amin'ny kaontin'ny mpampiasa teo aloha).
Mifandray ireo kaonty WhatsApp amin'ny laharana finday, na amin'ny olona, ​​na amin'ny mailaka na amin'ny fitaovana ara-batana, dia manome tombony be dia be ity rehefa manamarina amin'ny alàlan'ny SMS ny fampahavitrihana ny kaonty ary manadino momba ny fisoratana anarana sy ny teny miafina ary ny hafa, fa midika koa izany mety hitranga amin'ny fiainana manokana satria izay manana izany nomeraon-telefaona izany dia afaka mahazo ny data rehetra mifandraika amin'izany.
Mba hisorohana ny olona iray tsy hahazo ny WhatsApp amin'ny alàlan'ny fahazoana ny nomeraon-telefaonanao, anio dia hasehontsika anao ny fomba tsy mandeha ary esory tanteraka ny kaonty WhatsApp anao amin'ny dingana vitsivitsy.
1 Inona no dikan'ny hoe mamafa ny kaonty WhatsApp anao?
3 Dingana manaraka
Inona no dikan'ny hoe mamafa ny kaonty WhatsApp anao?
Hoesorina ny rohy mampifandray ny nomeraon-telefaonanao sy ny angon-drakitra WhatsApp anao manokana (sary momba ny mombamomba, ny toerana misy anao, ny chat, ny rakitra multimedia ...).
Ny fomba fandoavam-bola voasoratra anarana dia hesorina amin'ny mpizara WhatsApp.
Ny kopian'ny sakaizanao izay nampiantrano tamin'ny fitaovanao iOS sy ny iCloud dia hoesorina.
Maimaimpoana io isa io amin'ny fisoratana anarana WhatsApp vaovao.
Entina avereno eo an-toerana ny fitaovan'ny iOS anao Ao amin'ny PC na MAC anao, ny mamafa ny kaonty WhatsApp anao dia hanafoana ny backup automatique an'ireo chat ao amin'ny iCloud ary raha te-hamerina hamerina ny kaontintsika sy hitandrina ny fisie isika dia tsy maintsy mampihatra an'io backup io.
Hitanay ny fampiharana WhatsApp napetraka ao amin'ny fitaovan'ny iOS ary manokatra azy (azo ampiharina amin'ny Android).
Mandeha any amin'ny fizarana Fikirakirana ao anatin'ny fampiharana izahay ary mampiditra ny fizarana "Kaonty".
Ao amin'ny fizarana "Kaonty", kitiho ny safidy "Delete ny kaontiko".
Ampidirinay ny nomeraon-telefaoninay hanamafisana ny famafana ary rehefa vita izany mamafa ny rindranasa ao amin'ny fitaovantsika izahay (hamafana ny angon-drakitra rehetra voatahiry eo an-toerana).
Miaraka amin'ireo dingana tsotra ireo hofafana ny kaontinay am-pahombiazana ary ny olona manaraka izay mahazo ny nomeraon-telefaona misy anao izao dia ho afaka hisoratra anarana ho mpampiasa WhatsApp vaovao, nefa tsy mitazona resaka, sary na karazana data manokana an'ny tompony teo aloha.
Mihatra amin'ny tena io toe-javatra io, izany hoe, raha te hampiaina ny kaontintsika amin'ny fotoana rehetra isika dia hataontsika toy ny hoe mpampiasa vaovao isika, tsy maintsy misoratra anarana amin'ny nomeraon-telefaonantsika isika ary mampihetsika ny kaonty amin'ny alàlan'ny SMS mba hanombohana na hamerenana ireo angona rehetra avy amin'ny nomaniny ho solon'izay .
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fomba hamafana sy hanafoanana ny kaonty WhatsApp anao tanteraka
BhEaN dia hoy izy:
Tena marina, io no fomba famafana ny kaonty WhatsApp maharitra ...
Ny olana dia eo am-panaovana fampiharana dia manao izay tadiaviny ireto olon-dratsy ireto ... ary miala avy hatrany amin'ny ramanavy, herinandro maro taorian'ny nanafoanana ny kaonty, tampoka teo dia nilaza aminao ireo mpifandray aminao fa miseho amin'ny fampiharana indray ianao. Nojerenao, ary ... ... nipoitra indray ianao ... toy ny namerina namerina "backup" alohan'ny famoahana azy ireo ....
Nandany fotoana be tamiko ny nanatrika ny fangatahako nisoratra anarana, izay notanterahin'izy ireo taorian'ny herinandro maromaro sy mailaka maro nandrahona mpisolovava, ny Data Protection Agency, sns. Tsy namaly ahy mihitsy izy ireo, na tamin'iza na tamin'iza ... fa tamin'ny farany dia niafara tamin'ny famaranana ahy maharitra (heverina, fa mazava ho azy ... iza no mahalala).
Mamaly an'i BhEaN
Adriana vazquez dia hoy izy:
Raha misy manana iPhone ka milaza fa mila manafoana ny kaontiny, afaka manohy manampy ny sarin'ny mombamomba azy ireo ve izy ireo ary rehefa miantso azy ireo ianao dia hanome feon-telefaona anao ve izy ireo?
Valiny tamin'i Adriana vazquez
Ampidiro ny emulator Nintendo DS amin'ny iPhone tsy misy Jailbreak [NDS4iOS]